Deg Deg : Wasiir Hada Ku Dhawaaqey Inuu Iscasilay + [ Sababta ] - Ilays News
Deg Deg : Wasiir Hada Ku Dhawaaqey Inuu Iscasilay + [ Sababta ]
Moqdisho (Ilays-News):- Wararka hadda naga soo gaadhaya Magaalada Baydhabo ee Xarunta Maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegaya inuu is casilay wasiirka Tamarta iyo Biyaha Xukuumadda Soomaaliya Cabdi Casaiis Xasan Maxamed (laftagareen).
Wasiirka is casilay oo u sharaxan xilka Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa shuruud looga dhigay inuu marka hore xilkiisa iska casilo.
Lafta gareen ayaa sheegay in Maanta oo ay taariikhdu tahay 5/11/2018 uu iska casilay xilka wasiirnimo ee uu ka haayay Xukuumadda Federaalka Soomaaliya,isaga u taagan xilka Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
“Aniga oo ticraacaya shuruudihii ay soo saareen guddiga doorashooyinka koonfur Galbeed ee ahaa in qof xihaayo uusan tartami Karin ayaa sidaasi isku casilay,waxan u mahad celinayaa Ra’iisul Wasaare Kheyre oo xilkaan horay iigu dhiibay iyo dadkii aan isla soo Shaqeynay ayuu yiri Laftagareen.
Cabdi Casaiis Xasan Maxamed (laftagareen) ayaa horay u tartamay xilka Guddoomiyaha Golaha Shacabka,waxana xilligaa suu iska casilay xilka wasiiru dowlaha Wasaaradda Ganacsiga,isla markaana uu waayay xilkii uu u tartamay waxaana intaasi ka dib loo Magacaabay Wasiirka Tamarta Biyaha ee Xukuumada Soomaaliya.
Lafta Gareen ayaa kamid ah Musharixiinta loo saadaalinayo Koonfur Galbeed, waxaana la isla dhex marayaa inuu garab weyn ka helayo Dowladda Federaalka Soomaaliya.